အဲလ်ဘတ်နှင့်ကူဖာ: Cerebro အစားအခြားအိုး ၂ လုံး Linux မှ
မည်သို့ပင်အမျိုးအစား operating system ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာသုံးတာတောင်မှဘယ်သူမှလျှို့ဝှက်ချက်မရှိဘူး၊ အထူးနည်းလမ်းဖြင့်ကီးဘုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်း ၏မြင်သာထင်သာသို့မဟုတ်နီးပါးသီးသန့်အသုံးပြုမှုကို မောက်စ် (မောက်စ်).
ထိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်, များစွာသော operating system များနှင့် applications များ, ဟုခေါ်တွင် ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ (ခလုတ်များ) သို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုများကိုဖန်တီးထားသည် Launchers, လုပ်ရပ်များသို့မဟုတ် applications များ, ရန် အသုံးပြုသူကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်အောင်။ ငါတို့၌တည်၏ GNU / Linux Distros ငါတို့မှာဥပမာကောင်းတွေရှိတယ်၊ တစ်ခုကလျှောက်လွှာလို့ခေါ်တယ် "ဦး နှောက်"ကျနော်တို့မကြာသေးမီကပြောခဲ့သည့်အရာ၊ ငါတို့ပြောခဲ့ပြီးသောအခြား ၂ ခုမှာယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည်။ သူတို့က "အဲလ်ဘတ်နှင့်ကူဖာ".
၏ပြဿနာ အသုံးပြုသူကုန်ထုတ်စွမ်းအား ကွဲပြားခြားနားသော Operating Systems နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်သာမန်အသုံးပြုသူအတွက်မဟုတ်ဘဲသူများအတွက်အသေးအဖွဲဖြစ်နိုင်သည် နည်းပညာပညာရှင်များ သို့မဟုတ်အခြားအလုပ်နေရာမှ၎င်းသည်အရေးကြီးသည် မောက်စ်ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ရပ်များမပါဝင်ပါ ထပ်တလဲလဲသို့မဟုတ်သိသိနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ရန်။
ထိုအမှု၌, GNU / Linux Distros၎င်း၏များစွာသောအခြားအကြား အလွအင်္ဂါရပ်များ, အဘို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကွာအဝေးရှိပါတယ် အက်ပလီကေးရှင်း၊ ထိုကဲ့သို့သော monotonous အလုပ်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် မောက်၏အသုံးပြုမှုကို minimizeကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများတွင် application menu သို့သွားပြီး application ကိုဖွင့်ပါ။ သို့မဟုတ် terminal တစ်ခုသို့သွားပြီး command တစ်ခုကို run ပါ။
1 အိုး - အဲလ်ဘတ်နှင့်ကူဖာတို့သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ပေးရန်
1.3 အခြား featured launchers
အိုး - အဲလ်ဘတ်နှင့်ကူဖာတို့သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ပေးရန်
၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ developer များအရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အဲလ်ဘတ်ဟာ Launcher တစ်ယောက်ပါ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"Launcher သည်အရာရာတိုင်းကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်။ မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် application များ၊ ဖိုင်များသို့မဟုတ်သူတို့၏လမ်းကြောင်းများ (ဖိုလ်ဒါများ / လမ်းညွှန်များ) ကိုဖွင့်ခြင်း၊ ဘရောက်ဇာတွင် bookmark များဖွင့်ခြင်း၊ ဝဘ်ရှာဖွေခြင်း၊ အရာများကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Albert သည် Desktop Agnostic Launcher တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ပန်းတိုင်များသည်အသုံးဝင်မှုနှင့်လှပမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးချဲ့နိုင်မှုတို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို C ++ တွင်ရေးသားထားပြီး Qt မူဘောင်ကိုအခြေခံသည်။ ၎င်းကို ၁၀၀% အခမဲ့ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် GPL လိုင်စင်အောက်မှာတီထွင်ခဲ့သည်".
လက်ရှိအဘို့အသွား တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအရေအတွက်က 0.16.1 ရက်စွဲ 12 / 2018နှင့်လည်းမှာ website တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သည် GitHub.
၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ developer များအရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, Kupfer သည် Launcher (Launcher) အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"Kupfer သည် application များနှင့်၎င်းတို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုမြန်ဆန်။ အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုရန်အတွက် interface တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ် application တစ်ခုကိုရှာဖွေပြီးဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ Kupfer ကိုအလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်ရန်လွယ်ကူစေရန်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့မှသာလျှင်မြန်သော access paradigm သည် applications များထက်အရာဝတ္ထုများစွာကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ Kupfer ကိုသုံးတာကပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
လက်ရှိအဘို့အသွား တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအရေအတွက်က 3.19 ရက်စွဲ 03 / 2017နှင့်လည်းမှာ website တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သည် GitHub.
အခြား featured launchers
Avant Window Navigator (အောင်): https://launchpad.net/awn
GNOME လုပ်ပါ: https://do.cooperteam.net/
မီးပြတိုက်: https://github.com/emgram769/ မီးပြတိုက်
ပလာစမာ Kickoff: https://userbase.kde.org/Plasma/Kickoff
Ulauncher ဖြစ်သည်: https://ulauncher.io/
ပါးသိုင်းမွေး Menu ကို: https://gottcode.org/xfce4-whiskermenu-plugin/
ဟုတ်ကဲ့၊ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်သင်အသုံးမပြုပါ launcher appaဦး နှောက်, အဲလ်ဘတ်သို့မဟုတ် Kupferသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည် Ulauncher ဖြစ်သည်အခြားအရာအားလုံးသည်ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ၊ စွန့်ပစ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီသူများဖြစ်သော်လည်းအထူးသဖြင့် desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်။ Ulauncher ဖြစ်သည် ၎င်းသည်ခေတ်မီပြီးနောက်ဆုံးပေါ်၊ ထောက်ပံ့ထားသောလွှတ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည့် add-ons များစွာရှိပြီး Desktop Environment တစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါကြောင့်မကြာခင်မှာငါတို့ထုတ်ဝေတော့မှာပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Albert y Kupfer»2 အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေသော ကုန်ထုတ်စွမ်းအား applications များ အမျိုးအစား Launchersအဖြစ်ကောင်းသော ဦး နှောက်နှင့် Ulauncher; အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » အဲလ်ဘတ်နှင့်ကူဖာ: Cerebro ကိုအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးအိုး ၂ လုံး
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ Kupfer သည်ဤမျှကာလပတ်လုံးမွမ်းမံထားခြင်းမရှိပါက၎င်းကိုစွန့်ပစ်ထားပြီးဖြစ်သည်၊
Teo မင်္ဂလာပါ! ငါအကြောင်းအရာကိုကြိုက်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
launcher တော်တော်များများသည် freeze mode သို့ရောက်နေပါပြီ။ ပိုမိုခေတ်မီ။ အလုပ်လုပ်သောသူများသည်ကျွန်ုပ်အတွက် Cerebro နှင့် Ulauncher တို့ဖြစ်သည်။ သီးခြားစီဖြစ်စေအတူတကွသူတို့သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်သည်။ ၎င်းတို့အသုံးပြုသော Distro ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သူတို့ကိုငါကွန်ပျူတာမှာအတူတူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဘာပြproblemနာမှမှမပေးခဲ့လို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာအသင့်အတင့်အားကောင်းတာကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့ MilagrOS2(MX Linux 19) မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ငါ Ulauncher ကိုပိုနှစ်သက်ပါတယ်
Logan ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ Ulauncher သည် RAM memory အရင်းအမြစ်များစွာကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ထိုတွင်မြင်တွေ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Ulauncher ကိုအစားထိုးရန် Brain ကိုအစားထိုးရန်မဟုတ်ဘဲဖြည့်စွက်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ငါ Cerebro နှင့်အတူတိုးချဲ့စရာမလိုဘဲအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
Stratis 2.1 တွင် LUKS2 ကို အသုံးပြု၍ partition encryption ကိုထောက်ပံ့သည်